Apple naFoxconn vanoti vane hurongwa hwekugadzira muIndia | IPhone nhau
Zvirongwa zvekuwedzera kweApple muIndia zviri kunonoka kupfuura zvingafarire kambani iyi. Mushure mekutaurirana kwakawanda uye kubvumirana, hurumende yeIndia yakazobvumidza kambani kuvhura zvitoro zvekutanga munyika uye mukati memakore matatu ekutanga, isingamanikidzwe kutengesa zvigadzirwa zvakagadzirwa munyika, chiitiko chekambani chero inoda kuvhura zvitoro zvitsva munyika. Chikamu chekuwedzeredzwa kwemutemo uyu, chakatangwa nenzvimbo yeR&D iyo kambani ichavhura gore risati rapera munyika, kuwedzera kune yekuwedzera yekushandisa yevanogadzira.
Asi iyo Cupertino-based kambani inoda kurega nguva ichipfuura uye inoda maneja wayo wepamusoro mumabasa egungano tanga kutora matanho ekutanga kutanga kugadzira munyika. Sekureva kweThe Economic Times, Apple iri kumanikidza kambani kuti ive nezvivakwa muIndia zvakagadzirira mukati memakore maviri kuitira kuti itange kuburitsa mhando dze iPhone idzo dzave kuunganidzwa kuChina.
Mari yekutanga iyo ichafanirwa kuitwa nekambani yekuChina iri padhuze nemabhiriyoni gumi emadhora. Chatisingazive ndechekuti mune iyo yekutanga mari Foxconn iwe uchasarudza kuisa marobhoti sezvawakaita mune yako huru fekitori, umo vashandi vashoma vakadzikiswa kubva pavashandi zviuru zana gore rakapfuura kusvika pashoma pfuuri hafu.
Iyi mari yakaitwa nekutenda kuhurumende yedunhu rine fekitori yayo huru, asi zvinofungidzirwa kuti hurumende yeIndia haifunge kumbobatsira kambani nemari panzvimbo pekushandisa basa, basa rinoitwa nemarobhoti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple naFoxconn vanoti vane hurongwa hwekugadzira muIndia
MaChinese anogadzira muIndia, ngatirambei tichishandisa nyika….
Maitiro ekumisikidza ekuchengetedza optimization muApple Music muIOS 10